Iyo Seti Yakazara Yemazano Ekuwedzera Kubhadhara Kwako Nekunyanya Kushambadzira ROI | Martech Zone
Iyo Seti Yakazara Yemazano Ekuwedzera Kubhadhara Kwako Nekudzvanya Kushambadzira ROI
Chitatu, December 23, 2015 Chitatu, December 23, 2015 Douglas Karr
Kunyange izvi infographic kubva kuDatadial inoti yebhizinesi diki, Ndichave akatendeseka kuti tinoshanda nemamwe mabhizinesi uye makuru mabhizinesi asingatore mukana wezhinji emazano aya! Iri rinogona kunge riri runyorwa ruzere rwemazano andakaona kana zvasvika pakushandisa mubhadharo pakushambadzira paGoogle zvinobudirira.
Zvisinei nezveindasitiri yako, iwo matekiniki aunogona kushandisa kuita kuti hupenyu huve nyore kune manejimendi ePPC anoramba akafanana. Iyi infographic (kubva kuDatadial kusvika kwauri, ine rudo) inoputsa pasi 53 kufunga kwePay-Per-Dzvanya kubudirira. 53 Matanho Ekupedzisira PPC Kubudirira Kwebhizinesi Diki
Bhadhara Per Click Matipi
Keyword Matches - sanganisa yakafara uye yakatarwa mazwi ekutsvaga nekufamba kwenguva.
Ads - Edza mubvunzo wakasiyana wekutsvaga uye musanganiswa wekushambadzira.
makwikwi - Ndeapi mitengo nekutumira mameseji vari kukwikwidza vako vachishandisa?
Ad Adziviriri - Kuwedzeredza kutyaira kukuru kubatanidzwa uye hakutore mari yekuwedzera.
Yakareba-Tail Keywords - kazhinji inodhura zvishoma, inonyanya kukosha, uye inotungamira kukushandurwa kukuru.
Dynamic Keywords - otomatiki chinja ako akakosha mumashambadziro anogona kuwedzera kukosha uye shanduko mitengo.
Usatambisa Mabhatani - shandisa zvisina kunaka mazwi ekudzivirira kusangana kusingaenderane uko vashandisi vekutsvaga vasingazowani akakodzera.
bvunzo - tarisa iyo data, tweak izvo zvisingashande uye gadziridza izvo zvinoita.
Consistency - ita shuwa kuti laungage yako uye toni zvinoenderana nechako uye zvemukati.
Nzwisisa Kutsvaga Kwako uye Webhu Yekuongorora
Multi-chiteshi - kutsvaga kwekutsvaga, kuratidza, kushambadzira, nhare uye vhidhiyo chiteshi
Generic - dzivirira mazwi akajairwa ekutsvagisa anogona kuwedzera mutengo uye traffic, asi kwete kutungamira kukutendeuka.
nzvimbo - kana iwe uchimhanyisa emuno kana akawanda emuno mabhizinesi, setup nzvimbo kunanga.
Demographics - tarisa vateereri vako nezera, murume kana mukadzi uye mamwe maitiro.
Maitiro Akanakisisa - ita shuwa kuti kushambadza kwako kunoenderana nemirairidzo.
Data - tora data rakawanda sezvaungakwanise kugadzirisa zano rako.
Forms - chengeta mafomu mapfupi uye anotapira.
ongorora - ongorora data rako kuti uone mikana.
Contextual Kushambadzira, Ratidza Ads
Remarket - taura nevashanyi mushure me tehyve ndashandisa yako saiti uye kuruboshwe.
mudziyo - edza kunanga pane nhare, desktop kana zvese kuti uone mutsauko.
Dzvanya kufona - ipa nzira pane nharembozha yekufona yakananga kubva kushambadziro.
Clickability - ita kuti mifananidzo yako inyatsooneka.
Mutengesi Ratings uye Ongororo - sanganisira ratings uye ongororo kune yepamusoro kuvimba.
URL - sanganisira mazwi akakosha mune yako yekubatanidza slugs.
Graphics - shandisa akakodzera mifananidzo.
havukavu - kuwedzera peji kumhanyisa kuchavandudza yako yemhando yepamusoro.
wirirana - ita shuwa kuti webhusaiti yako inoteerera kune mobile kana desktop desktop.
Subscriptions - wedzera tsamba yekunyorera kuti urambe uchiita nevashanyi vanofarira.
Optimization - deredza huwandu hwekudzvanya hunodiwa kuti uchinje.
Testimonials - ratidza zvipupuriro pane yako saiti kutendeseka.
Ndiwo mashoma emazano akakosha, heino ese infographic:
Tags: adwordsadwords ekuwedzeraAnalyticstinya fanera optimizationtinya kufonadatadialdemographicsdesktop peji yekumharakuratidza kushambadzirasimba mazwi akakoshaoptimization fomugeneric keywordsnzvimbo yakanangwagoogle adwordsgoogle analyticsinboundkumhara peji optimizationnzvimbo yakanangwarefu-muswe keywordspeji yekumhara nharembozha ppcmulti-chiteshiKeywordspage speedkubhadharwa watinyayakabhadharwa kutsvagaakabhadhara kuyedzwa kwekutsvagakubhadhara pakukandappcppc adspc kuongororappc nhareppc kuyedzakudzokororawiriranaReviewswongororo dzevatengesiUchapupu
5 Statistics Inoratidzira Nhare dzeKutengesa Maturusi ari Kuwedzera Kunatsiridza Performance
Groove: Rubatsiro padhesiki Tiketi yeMatambi Ekutsigira